Amandla amahle we-noni - AFRIKHEPRI
Ubuhle obuhle be-noni
e IMPILO NEMPILO
Usuke usabela "Izinhle ezimangalisayo ze-noni" Imizuzwana embalwa edlule
CItshalwe iminyaka engama-2 500 ngabasePolynesia, i-noni isithelo somuthi oshisayo esikhula ikakhulukazi eziqhingini zaseNingizimu Pacific. Abantu basePolynesia badonsela ukulingana kwabo kokuphila ezimfanelweni zokuphilisa ze-noni. Noma kudliwa kungaphekiwe noma kuphekwe, i-noni yaziswa kakhulu, phakathi kwezinye izinto, ukuqinisa izivikelo zemvelo zomzimba.
UNoni, umlingani wemvelo womzimba
Esetshenziselwa izinkulungwane zeminyaka ukuphatha zonke izinhlobo zezifo, i-noni isetshenziswa ngokuyinhloko ngejusi. U-Noni uyakwazisa inhlabathi eyizintombi kunoma imuphi umanyolo wamakhemikhali futhi ujabulele ngokugcwele umhlaba ocebile ngezakhi zokulandelela.
I-multivitamin ye-cocktail yeqiniso, i-noni ingabuye isetshenziswe ngesimo samaphilisi, ama-infusions noma amafutha. Ukusebenzisa ngokunenzuzo izakhiwo zayo zokulwa ne-antioxidant kanye ne-antibacterial, ukulungele ukuthenga i-100% yemvelo ye-noni yemvelo bese uyidla ngaphambi kokudla kwasekuseni noma nje ngaphambi kwesidlo sakusihlwa.
I-immune stimulant, lesi sithelo sinezinto ezivikela umzimba ngokumelene nezifo ezishisayo futhi zibophe ukuguga kwesikhumba. Ngaphezu kwalokho, i-noni ayinakho ukuphikisana ngisho nabesifazane abakhulelwe nabalahlayo (kuboniswe ngokucacile).
Kuyavunywa, i-noni ayinayo imvume yemithi esemthethweni, kodwa ubufakazi obuningi bomsebenzisi obuqoqiwe udokotela weMnyango wezeMpilo waseMadrid baqinisekisa ukuthi i-78% yabathengi be-noni, izisulu zamanqamu athile, i-cardio- izinkinga ze-vascular noma ze-dermatological, baye babona impilo yabo ithuthukisa (noni ayinakho ukulahla ukwelashwa).
Iziqu ze-in vitro nezilwane ziye zaqinisekisa ukuthi izithelo nezimpande zempande zingashukumisa isimiso somzimba sokuzivikela. Izithelo ezikhishwayo, ngaphezu kwalokho, zinezinto zokulwa namagciwane, i-antiviral kanye ne-antifungal.
Ngaphezu kwalokho, amaqabunga, iziqabunga nezithelo ezihlolwe ezilwaneni, ziphuthumise ukuphulukiswa kwamanxeba. Babuye bakwazi ukunciphisa ukuzwela kobuhlungu (umphumela we-analgesic) nokunciphisa i-edema (umphumela wokulwa nokuvuvukala); okuvame ukuqinisekiswa ukusetshenziswa komdabu othile wesitshalo.
Abacwaningi futhi bathola izinto eziphathelene ne-noni antioxidant, ezikwazi ukuvikela umzimba ngokumelene nokulimala kokucindezeleka okwenziwe nge-oxidative, ikakhulukazi ngokumelene ne-dyslipidemia, nomdlavuza.
UNoni, ofuna izithelo
UNoni ukhula zasendle unyaka wonke, obeka isivuno esingunaphakade, kodwa hhayi nganoma isiphi isikhathi! Ngakho ukuthi i-noni inikeza ijusi lekhwalithi engcono, kubalulekile ukuyikhetha ekuvuthweni.
Izihlahla ezinomusa kakhulu zingahlinzeka ngamathani amabili izithelo ngenyanga. Uma i-noni iletha inhlalakahle ethile, ukunambitheka kwayo ngezinye izikhathi kungaphazamisa. Uma ijusi layo lingasetshenziselwa injabulo noma ukuphuza, ungakwazi ukujabulela ngokugcwele imiphumela yalo enenzuzo ngokuyixuba ngejusi yezithelo zemvelo, ngesilinganiso se-30ml ngosuku.
Njengamanje, izici eziningi ezihlonishwayo zithinta abacwaningi kanye nososayensi emhlabeni jikelele ... I-noni, ukwelashwa kwemvelo emangalisayo? Kungcono kuwe ukuhlola!
EMalaysia, i-noni isetshenziselwa ukwelapha izinkinga ze-urinary, isifo sikashukela, umkhuhlane, ukungena esikhathini esinzima nokuphuma kwegazi.
E-Caribbean, i-noni ibhekwa ngokuthi "umuthi wobuhlungu" futhi isetshenziselwa ukuhlambalaza, amathambo aphukile namafiva.
ENingizimu-mpumalanga ye-Asia, i-noni iphatha izinkinga zomphimbo, umlomo, izinsini., EPhilippines, i-noni ibhekwa njenge-purifier yamathumbu.
Ukudla okwenziwe ngokudla okukhishwe kusithelo se-Noni - amakhompiyutha ayi-120 - Ukuqinisa amasosha akho omzimba nokugaya kahle - Kunempahla elwa nokuvuvukala - Umkhiqizo wase-UK
14,99€ kukhona kusitoki
1 okusha kusuka ku-14,99 €
kusukela ngo-Ephreli 9, 2020 11:18
CON ISIVUMELWANO ESIPhezulu ENONONI: Ngamunye wamaphilisi ethu aqukethe okulingana nezithelo eziyi-9000mg ezinezithelo eziyi-20: 1. Uzuza kuzo zonke izinzuzo zikaNoni.
OOD OKUHLE KAKHULU NGEMPILO YAKHO: Isithelo seNoni (morinda citrifolia) sisetshenziswa kabanzi eziqhingini zasePacific.
AL SUPER QUALITY: Izithako zethu zikhiqizwa e-UK futhi zihambisana namazinga we-GMP aqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphezulu. Sisebenzisa kuphela izithako ezihamba phambili ngaphandle kwezihlungi, ama-binders noma izengezo.
✔️ IMISEBENZI YENONONI: Inama-alkaloids abalulekile ukuze kugcinwe umzimba olinganayo.
S SATISFACTION OKUQUKETHWE: Ngesikhathi Sempilo Yezempilo, sizibophezele ukukunikeza okungeziwe kokudla kanye nezinsizakalo ezingcono kakhulu zamakhasimende. Ukwaneliseka okungu-100%